Cabdikariin, Wuu Nool Yahay VOA-na Lama Uuna Hadlin ee Ruux Kale Ayaa Hadlay. – Rasaasa News
May 12, 2010 Cabdikariin, VOA-na Lama Uuna Hadlin ee Ruux Kale Ayaa Hadlay., Wuu Nool Yahay
“Cabdikariin Sheekh Muuse, mar hore ayuu ka tagay garabka onlf ee Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], wuuna nool yahay oo dhib ma qabo, wuxuuna joogaa meel nabad ah” sidaasi waxaa yidhi Maxamed Sheekh Muuse
Cabdikariin, waxay mar hore isqabateen Jwxo-shiil, dhamaadkii 2008, waxaana uu diiday in uu ku dabo socdo Jwxo-shiil, dhibaatooyinka uu ku hayo halganka ay wado ONLF.
Sanadkii 2009, Jwxo-shiil, waxaa uu isku dayey in la dilo Cabdikariin oo xiligaas dagaal yahaniin ku haystay meel u dhaw Danood, laakiin way u suurto gali wayday in uu dilo Cabdikariin.
Cabdikariin, mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa uu joogay Magaalada Gaalkacayo, wax hawl ah oo uu Jwxo-shiil, ku lug leeyahayna kuma uusan jirin, laakiin waxaa uu ku jiraa halwlo Jabhadeed iyo sidii uu gacan uga gaysan lahaa in uu Jwxo-shiil, dhinac u dhaafo halganka uu qasay.
Waxaa nala soo xadhiidhay dad Cabdikariin Eheladiisa ah, oo noo cadeeyey in uu nool yahay oo uusan joogin meel dagaal ka socdo iyo gudaha Ogadeeniya midna, waxay sheegeen in uu ku jiro hawlo nabadeed iyo sidii qoriga loogu badali lahaa xal dhaama oo nabad ah. Waxay eheladiisu noo xaqiijiyeen in Cabdikariin uu qayb ka yahay heshiiska nabada ee ay wad UWSLF, ayna isku arkeen saraakiil Somali Galbeed ah gudaha Somaliya.
Wararka ay faafisay Ideecada VOA ee ay sheegeen in ay waraysteen Cabdikariin ayeyna waxba ka jirin ee ah ruux kale, arintaas oo ay VOA laftigeedu shaki ka muujisay ayna khadka uga baxday.
Cabdikariin, wuu nool yahay wuxuuna ku sugan yahay meel Somaliya ka mid ah diyaarna xiligan uma ah in uu codkiisa kor u qaado arin siyaasadeed awgeed, waxaana uu hadlidoonaa xilga ay munaasab u noqoto.
Waxaana dhab ah in uusan jirin xiligan xidhiidh u dhaxeeya Cabdikariin iyo Jwxo-shiil, waana arintaas sababta ay kooxda Jwxo-shiil, war uga soo saari waayeen. Hadalka Maadeey ayaa ahaa uun beenin ay BBC-du ka keentay madaama ay la soo xadhiidheen ayna waydiiyeen waxa jira.
Ismaamulka Somalida Ogadeeniya oo Sheegay in Gabalka Sool Laga Yaabo in uu Maamulkooda ka Mid Noqdo.